यो हप्ता व्यापारमा उल्लेख्य प्रगति रहनेछ। सप्ताहको बिचमा केहि शारिरिक कस्टको अनुभव रहदा सामान्य संकट आउन सक्ला। उत्तरार्धमा बित्तधि सुखको भोग गरिनेछ । शत्रुपक्षलाई आफ्नो तर्क-वितर्कले हराउन सकिनेछ । प्रेमकोक्षेत्र बलवान नै देखिन्छ ।अनेक साधनको प्रयोगले समय अर्थ पूर्ण रहला । प्रयासगर्दा थोरै मिहिनेत को खाचो पर्न सक्छ।
हप्ताको अन्त्यमा काम बिग्रिनाले तनाब बढ्न सक्छ, सचेत रहनु होला।धन प्राप्तिको योगले सप्ताह सुखमय बित्न सक्ला। १२ गते रोग र मानहानीले चिन्तींत बनाउन सक्ला। तपाईंले धेरै रमाईलो गर्नुहुनेछ र परिवारको लागि अचम्मको योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चीजहरूमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षाको लागि विदेश जान योजना बनाउन सक्छन्।
सुरुमा अन्नलाभमा बृदी हुने देखिन्छ । रोकिएको धन टाढाबाट आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । शुक्रबार र सनिवार मनमा आलस्यआउन सक्ला । रुघा-खोकीले दुख दिन सक्ला ।सामाजिक क्षेत्रमा सेवा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । राम्रो परिणाम पाउन विद्यार्थीहरूले कडा परिश्रम गर्नु पर्छ। व्यापारी र कर्पोरेट क्षेत्रमा सेवा गर्नेहरूले लाभ उठाउनेछन्।
आर्थिक संकटले दुख दिएता पनि पछि राम्रो हुदै जानेछ। आइतवार धननाशको संकेत देखिएतापनि हप्तासंगै उन्नति प्रगति हुनेछ ।धनलाभ र द्रव्यप्राप्तिको सम्भावना रहेको छ। जीवन साथीको आत्म विश्वासले यो हप्ता राम्रो सँग नै बित्न सक्ला।सत्ताधारी पार्टीबाट सम्मान र नाफा दुवैको प्राप्ति हुनेछ।मनोरंजन र स्थानको भ्रमण गर्न पनि सम्भव छ।हप्ताको उत्तरार्धमा प्रियजनलाई भेट्न सम्भव छ।
अनेक क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिदेख्न पाइनेछ। व्यक्तिहरुले केहि सहयोग नगर्दा मनमा पिडाको अनुभव हुन सक्ला। बिहिबार किनमेल खर्च र घरेलु काममा बदी ध्यान दिनु पर्ला। हप्ताको अन्तिममा कतै बाट पैसा प्राप्त हुदा आर्थिक सन्तुलन मिल्न जना सक्ला।
बिहिबार पैसा फस्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यो वाहेक यो हप्ता सुखद रहन सक्छ। सप्ताहकोअन्त्यमा भोज-भतेर र सामाजिक काममा सहभागी भइएला।आफन्तजनबाट सोचे जस्तो सहयोग नमिल्दा पीडादायी अनुभव हुनेछ ।जो बिरामी परेका थिए आफ्नो स्वास्थ्यमा सकारात्मक सुधार देख्नेछन्।तपाईंको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस् र ढिलो सवारी साधन चलाउनु होला ।प्रेम सम्बन्धमा विचारशील कदम चाल्नुहोस्।
सम्मान बढेको अनुभव रहनेछ। सप्ताहको मध्यमा दबाब र तनाबको स्तिथि आउन सक्ला। सनिबार पारिवारिक कर्ममा धन खर्च हुन सक्ला।परोपकारको भावना आउनाले सबैको प्यारो भईएला। अवसरले हजुरलाई पछ्याउदा समयलाई चिन्नु होला । भै सकेको काम फेरी सुरु गर्नुपर्ने आवस्यकता रहन सक्छ। आयमा उन्नति, वृद्धि देखिएको छ।
अनावस्यक विवाद र झगडामा परिएला ।आफुअपमानित भएर मन चिन्तिंत रहनेछ ।प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ, चिन्तित नहुनुहोला डटेर लाग्दा जित्न सकिनेछ । साना समस्या र असहमति सप्ताहको मध्यमा देखा पर्नेछ ǀतपाईंले यी साना चीजहरूलाई बेवास्ता गर्नुपर्दछ, अन्यथा तपाईंले आफ्नो मानसिक शान्तिको नाश गर्नुहुनेछ ।आफ्ना समस्याहरू कसैसँग बाँड्न प्रयास गर्नुहोस्, तपाईंलाई राम्रो लाग्नेछ। एक्लैको क्रियाकलाप धेरै हुनेछ , सप्ताह राम्रो छ।
सबै पक्ष राम्रो र सबल देखिएको छ। राजनैतिक, अध्ययन अध्यापन र प्रतिस्पर्धीहरुलाई पन्छाउदै अगाडी बदिएला ।कारोबारबाट भने जस्तो नाफा कमाउन सकिनेछ। यो हप्ता बिद्यार्थीहरुले आफ्ना गुरुहरूको समर्थन प्राप्त गर्नेछन्ताकि तिनीहरू आफ्ना अपूर्ण लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सफल हुनेछन्।प्रशासनको सहयोगमा, तपाईंको काम पूरा हुनेछ र आवश्यक कागजातहरू पनि पूर्ण हुनेछन् ।
वित्तको सुखको अनुभव रहनेछ । आफन्तजनको केहि साना सहयोग गर्न सक्लान । आफ्नै दक्षतामा विभिन्न कार्यहरु सम्पन्न हुनेछन् । परियोजनाको लागि तपाईंको प्रतीक्षा केहि लामो हुन सक्दछ। विपक्षीहरूले तपाईंको काममा बाधा पुर्‍याउने प्रयास गर्नेछन्।यदि तपाईंले सानो कदमलाई बेवास्ता गर्नुभयो भने समस्यामा पर्न सक्नु हुन्छ, विवाह र प्रेम सम्बन्ध अझ बलियो हुनेछ।
काम बिग्रिनाले सप्ताहको प्रारम्भमा दुखको अनुभूति भएता पनि पछि बित्तादी सुख हुनेछ। केहि अभावको सामना गर्नु पर्ला। बुधबारबाट केहि राहत मिल्ला । बोली वचनमा ध्यान दिनु होला, टाढाको यात्रा नगर्नु होला। साथीभाई हरुमा आफ्नो छवि कायम राख्न धेरै नै कसरत गर्नु पर्ला।
रोगलेआक्रमण गर्न सक्ला।जिम्मेवारी थपिन सक्ने हुनाले बोझपूर्ण समय लाग्नेछ । सरिरले दुख दिदा मन खुशी हुनेछैन । यो हप्तातपाईको जीवनसाथीको भावना र आवश्यकताहरूको ख्याल राख्नुहोस्, जसले तपाईको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनेछ र तपाईको प्रेम जीवनलाई सुखी बनाउनेछ तपाईले आफ्नो हराएको वस्तु फेला पार्न आशा गर्न सक्नुहुनेछ।
आज कुन राशिको भाग्य कस्तो ? हेर्नुहोस् आजको राशिफल
आज कुन राशिको भाग्य कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् राशिफल
आज कुन राशिको भाग्य कस्तो, हेर्नुहोस् राशिफल